IHuawei P30 iza kuza nesimanga kwimo yekhamera yasebusuku [Teaser] | I-Androidsis
IHuawei ivavanya rhoqo umgca wayo olandelayo, i Uthotho lwe-P30, Phambi kweyakho ukumiliselwa ngokusemthethweni, ezakubanjwa ukuphela kwenyanga.
I-P30 Pro sele ifumene ukujonga umbulelo kwizakhono ze "Super Zoom" Kuza kuza nazo iikhamera ezine ezibekwe ngasemva. Ngelixa silinde umhla wokukhutshwa, IHuawei, kwakhona, iqhayise ngemodyuli yokufota yohlobo oluphakathi, i-P30, ngokusebenzisa ipowusta ebonisa amandla ayo okufota ebusuku.
Umenzi wase-China waya e-Weibo eyokwazisa ngefoto yepowusta, ebhalwe isiqubulo esithi "Super eqaqambileyo" ngesiNgesi, ngesixhobo se-P30 njenge-protagonist. Njengabanye abavelisi, nabo IHuawei ibonwa igxininisa amandla ekhamera asezantsi. Inkampani iyibiza ngokuba ngumnqa omtsha oza "kutyhila isigqubuthelo sobusuku kwaye ubuyisele imibala yayo yokwenyani."
Ngokweenguqulelo ezintsha ze-tipster eyaziwayo, uRoland Quandt, iHuawei P30 entsha iya kuba nemodyuli yekhamera engasemva kathathuNgelixa umntakwabo, iP30 Pro, iya kuba ne-ToF sensor eyongezelelweyo, iyonke iyine ngasemva kwayo. Zombini ezi zixhobo ziya kudlala uyilo olufanayo, kunye nomboniso wamanzi, kwaye iya kuba yeyokuqala kwii-smartphones zeHuawei P ukuqala kunye netekhnoloji yeminwe yokubonisa.
Uthotho lweHuawei P30 (ngaphandle kweLite version) ixelwe ukuba inefayile ye- IKirin 980 SoC, I-8/12 GB ye-RAM, i-40 W ukutshaja ngokukhawuleza kunye nenotshi yombethe. Ngapha koko, iHuawei P30 Pro iza kufika ine-10x ye-hybrid zoom, i-6,5-intshi ye-OLED ukubonisa, kunye nenkxaso ye5G. Umntakwabo, i-P30, iya kuba nekhamera ngasemva kathathuIkhamera yangaphambili ye-24 MP, i-8 GB ye-RAM kunye nepaneli ye-OLED ye-6.1 intshi.
Kutshanje, imigaqo yeHuawei P30 Pro yaqinisekiswa ngefayile ye- Uluhlu lweAnTuTu y Geekbench. Inguqulelo yayo elula, i P30 Lite, aka "Huawei Nova 4e", iya kuyenza ukuqala eChina ngomso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IHuawei P30 iza kuza nesimanga kwimo yekhamera yasebusuku [Teaser]
Eyona app yemozulu ilungileyo ngalo mzuzu ikhululekile kwaphela !!